Qabiilkan Waa Kan Ugu Yaab Badan..Arag Magaciisa. | Xaqiiqonews
Qabiilkan Waa Kan Ugu Yaab Badan..Arag Magaciisa.
Waxaa la aaminsanyahay in qabiilkani ay yihiin kan kaliya ee dunida ku nool, kaasi oo dadkiisa ay nolashooda oo dhan ku qaatan sixirka, jiniga ayey la ciyaaraan mana xirtaan dhar, badana waxa ay cunaan hilibka xaywaanaadka laakin mar mar dadka ayey cunaan!
Dadku waxa ay ugu yeeraan magacyo badan, sida “humaagga shayaadiinta”hase ahaate magacooda rasmiga waa “”Corway”, qabiilka qarsoodiga ee dunida aysan wax badan kala socon, waxa ayna ku nool yihiin Dalka Indonesia.
Qabiilkani nolooshooda wax badan kama duwan “casrigii dhaxgxaanta” ee dadka ay ku noolaayeen gododka, waxa ay ka go’anyihiin dunida inteeda kale, iyagoo ku hoyda guryo ay ku dhistaan geedaha korkooda.
Waxyaabaha ugu caajiibka badan ee qabiilkani aaminsanyihiin waxaa ka mid ah hadii dad ka dhintaan in ay nolasha dib uga soo laabanayaan, halka ninka qabiilkani ka mid ah uu guursan karo intii uu rabo oo naag ah, goortii rabo, waxaana dhacda in halkii nin uu qabo 10 naag ama ka badan.
Sawir qaade indha-adag oo Taliyaani ah oo lagu magacaabi jiray Gianluca Chiudini” ayaa noqday qofkii ugu horeeyey ee sawir ka soo qaada qabiilkan dadkana tusa sanadkii 1974-kii.
Sidoo Kale Aqri..Ilbaxnimada Qabiilka!
Xubnaha qabiilkan aya si dabar go’aya waxaana magalooyinkooda qaar ay hadda isku sii badalayaan “kuwa casri ah” wallow qabiilkani lagu tilmaamo shucuubta ugu xagjirsan ee ku dhaqan dhaqankooda.
Halkan riix.Si Aad u Aragto Wararka Muhiimka ah ee Bogga Hore